China engenan- Steel iityhubhu For Petroleum nokuqhekeka, GB9948-2006, Sanon Pipe nomakhi kunye Supplier | Gold Sanon
Nokujika Steel ngemibhobho For Petroleum nokuqhekeka, GB9948-2006, Sanon Pipe
Ngemibhobho kwisinyithi ukuba petroleum genge , nguZerede njengokuba ngemibhobho fumace, iityhubhu exchange ubushushu a nd
imibhobho e plants.High quality carbon amabakala zokwakha petroleum kunye wokucokisa zezi 20g,
amabakala zokwakha ingxubevange; 20mng kunye 25mng: 15mog, 20mog, 12crmog, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, etc
Intlawulo: 30% idipozithi, 70% L / C okanye B / L ikopi okanye 100% L / C kwi emehlweni
Min.Order Ubungakanani: 1 PC
Supply Amandla: Annual 20000 Tons Inventory of Steel Pipe
Lead Ixesha: iintsuku 7-14 ukuba imfuyo, kwiintsuku 30-45 ukuya isivuno
Nokupakishwa: Black shwaka, Wotho kunye cap wonke umbhobho eyodwa; OD ngezantsi 219mm imfuneko kuphazamiseka inyanda, kunye isiqhuma nganye akukho ngaphezu kweetoni-2.
Grade Group: 10 , 12CrMo , 15CrMo, 07Crl9Nil0, etc
Ubushushu Treatment: Annealing / normalizing / Tempering
Yesicelo: wesizalo kobushushu
Surface Unyango: Njengoko Izidingo loMthengi
Ukusetyenziswa: wesizalo kobushushu
ngemibhobho kwisinyithi ukuba petroleum ngokuhlaziya nenokusetyenziswa netyhubhu kwisinyithi ngenxa ngemibhobho eziko, iityhubhu exchange ubushushu kunye nemibhobho noxinzelelo kushishino petrochemical.
Carbon amabakala zokwakha ezikumgangatho ophezulu kakhulu 20g, 20mng kunye 25mng.
Yenza ingxubevange amabakala zokwakha: 15mog, 20mog, 12crmog
KwiBanga le carbon ezikumgangatho ophezulu zokwakha: 10 # , 20 #
carbon amabakala kwizinga eliphezulu lokwakhiwa steel: 20g, 20mng kunye 25mng
Yenza ingxubevange amabakala zokwakha: 15mog, 20mog, 12crmog, 15CrMoG, 12Cr2MoG, etc
kwizinga eliphezulu carbon zokwakha
Yenza ingxubevange zokwakha
ubushushu stainless steel enganyangekiyo
MPA Elong emva ngokwaphulwa A /% Shork Ukunciphisa amandla kv2 / j inombolo yobulukhuni Brinell
ngobude transver ngobude transver
kungabi ngaphantsi kwe akukho ngaphezu
Kuba kuhlinzwa udonga ubukhulu ngaphantsi kwe 5mm ityhubhu musa ukwenza yobulukhuni experiment
ngamanzi, uvavanyo kuya kwenzelwa Imibhobho ephakathi yentsimbi enye kwenye. Uxinzelelo iphezulu vavanyo 20 MPA. Phantsi uxinzelelo test, ixesha uzinziso akayi kuba ngaphantsi kwe-10 ubudala, yaye ukuvuza umbhobho sobhedu akuvumelekanga.
Flattening uvavanyo iya kuqhutywa umbhobho kuhlinzwa engaphandle ubukhulu ngaphezulu kwe-22 mm
High umgangatho carbon zokwakha kunye nemibhobho insimbi (ubushushu-resistant) kunye sangqa kumphandle elingekho ngaphezu kwe 76 mm kunye Ebubanzini bodonga elingekho ngaphezulu kwe-8 mm iya kuxhomekeka ekwandiseni uvavanyo. Olu vavanyo lokudlabhuka kwenziwa kwiqondo lobushushu igumbi. I engaphandle ububanzi lokudlabhuka izinga kwisampula emva kokuba Taper phezulu ophambili yi-60% ye-lokudlabhuka uya kuhlangabezana neemfuno itheyibhile 7. amathanda Akukho okanye amathanda zivumelekileyo kwisampula emva lokudlabhuka. Ngokutsho neemfuno demander kwaye kuphawuliwe isivumelwano, ingxubevange zokwakha nazo zingasetyenziswa nokwandisa uvavanyo.
Imibhobho zentsimbi kuya kuxhomekeka cuke enye uphucule nokubonwa omnye ngokungqinelana kunye namalungiselelo GB / T 5777-2008. Ngokutsho neemfuno demander, ezinye iimvavanyo ezingezo-etshabalalisayo zifakwe emva thethwano phakathi umthengisi kunye demander kwaye kubonisiwe imvumelwano.
Intergranular nokumelana test
Intergranular test umhlwa iya kuqhutywa umbhobho steel stainless (ubushushu-resistant). Indlela yokuhlola iya kuba ngokungqinelana kunye namalungiselelo Chinese indlela E GB / T 4334-2008, yaye intergranular umhlwa tyekelo akuvumelekanga emva kovavanyo.
Emva thethwano phakathi umthengisi kunye demander, yaye sibonile isivumelwano, lo demander nga kumisela ezinye iindlela umhlwa uvavanyo.
mechanical / Chemical & nesichumiso Imibhobho
Previous: GB 3087 pipe seamless kwibhoyila ingxubevange sentsimbi standard xi Phantsi Medium xi
Okulandelayo: nokujika ingxubevange steel kumbhobho ASTM A335 umbhobho kwibhoyila koxinzelelo oluphezulu eqhelekileyo
Nokujika Steel ngemibhobho For Petroleum ngokuhlaziya
ingxubevange Pipe Supplier , 40crmo ingxubevange Steel Pipe , P22 ingxubevange Steel Pipe ,